यो सबै सेट थाहा छ | Shekou Woman
ती गर्मी कम्पनीहरू महसुस गर्दै! केहि खच्चर र एक फींकी साइड ब्यागको साथ अन्तिम लुकीको साथ मिलाउनुहोस्। यसलाई केहि सुनको साथ केहि सुनको साथ समाप्त गर्नुहोस् सबैको ध्यान खिच्नका लागि। यो स्कर्ट बुना कपडा र एक लोचदार कमरब्यान्डको साथ आरामदायक फिटको लागि अनुमति दिन्छ।
मा पनि उपलब्ध छ सेतो
मोडेललाई सानो आकार लगाउँछ
2x-सानो (प्रतीक: 6-8 हप्ताहरूमा जहाजहरू) X-सानो (प्रतीक: 6-8 हप्ताहरूमा जहाजहरू) सानो मध्यम ठूलो X-Law (Wtelist: 6-8 हप्ताहरूमा जहाजहरू) 2x-ठूलो (प्रतीक: 6-8 हप्ताहरूमा जहाजहरू)
2x-सानो (प्रतीक: 6-8 हप्ताहरूमा जहाजहरू) (Out of stock) X-सानो (प्रतीक: 6-8 हप्ताहरूमा जहाजहरू) (Out of stock) सानो मध्यम (Out of stock) ठूलो X-Law (Wtelist: 6-8 हप्ताहरूमा जहाजहरू) (Out of stock) 2x-ठूलो (प्रतीक: 6-8 हप्ताहरूमा जहाजहरू) (Out of stock)
मलाई सेट मनपर्‍यो तर म चाहान्छु स्कर्ट केहि सेन्टीमिटर लामो भएकोले मसँग धेरै लामो खुट्टाहरू छन्, त्यसैले मैले तल शर्टहरू लगाउनु पर्छ। अझै पनी यो मनपर्दछ, म टुक्राहरू अलग लगाउन चाहान्छु। तिनीहरूलाई धेरै लगाउनुहोस्!
मलाई यो सेट एकदम मनपर्दछ! उत्तम फिट हुन्छ, म सामान्यतया आकार xs / sm हुँ र सानोले मेरो लागि ठूलो काम गर्‍यो! धेरै राम्रो र राम्रो गुणवत्ता सामग्री !!
मन पर्यो!!! आरामदायक र मा सार्न सजिलो !!
यो साइजमा सहि फिट हुन्छ! सामग्री सुपर स्ट्रेचाई छ र तस्वीर जस्तो देखिन्छ।
राम्रो सामग्री! यद्यपि यो अलि सानो चल्छ तर यसको धेरै विस्तार हुन्छ!
वास्तविक नरम र सुन्दर प्रेम सेट, भन्न छ कि शीर्ष स्कर्ट भन्दा ठूलो छ धेरै धेरै स्ट्रेच तर धेरै सुन्दर छ
St तारे यो सेट धेरै प्यारा छ! फेब्रिक यति नरम छ र यो सँगै वा पृथकको रूपमा लगाउन उपयुक्त छ!
तपाईं मर्न यो सेट को लागी मर्नु हो। यसको लागि मेरो प्रेम व्यक्त गर्न सक्दैन
मलाई यो धेरै मनपर्दछ धन्यवाद! मलाई यो धेरै मनपर्दछ धन्यवाद! xx
v खुसी शपर मलाई यो शैलीको शैली र आकार मनपर्दछ र मलाई लाग्छ कि यसले वास्तवमै मेरो शरीरको प्रकारको प्रशंसा गर्दछ!
माया प्रेम प्रेम यो सेट यति सुपर प्यारो प्रेम र मेरो साथीहरु लाई लगाउन प्रतीक्षा गर्न सक्दैन 21 औं प्रेम प्रेम प्रेम ❤️
कपडा यति नरम छ !! कपडा यति नरम छ !!
ワ ン ピ ー ス 私 お 気 気 入 り の ワ ン ピ ー ス。 大阪 へ の 配送 は 非常 に 速 か っ た
उत्तम यो सेट बिल्कुल उत्तम छ। यसको बारेमा सबै कुरा अचम्मको छ। धन्यवाद शेकोउ !!! Xoxo
St ताराहरू साइजमा साइज, कम्फेल क्वालिटी फेब्रिक, द्रुत शिपिंग! सिफारिश गर्दछ!
यति धेरै प्रशंसकहरू पाए
उत्तम सम्भवतः सबैभन्दा स्वाभाविक सेट मेरो स्वामित्वमा छ, कपडा यति नरम
उत्तम खरीद मसँग कालो छ र केवल सेतो अर्डर पनि गर्‍यो किनकि मँ मायामा छु र दुबै र colorsहरू चाहिन्छ!